क्रिकेटको प्रशिक्षण पछि धकेलियो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
हाललाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्यालेन्डर केही नभएकाले भदौ १ गते सुरु हुने भनिएको प्रशिक्षण एक महिनासम्म धकेलिन सक्ने भएको छ ।
श्रावण २२, २०७७ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण एक महिना पछाडि धकेलिने भएको छ । तत्कालका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्यालेन्डर केही नभएकाले भदौ १ गते सुरु हुने भनिएको प्रशिक्षण एक महिनासम्म धकेलिन सक्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानलाई २०२१ को जनवरी अगाडिसम्म नेपालको कुनै पनि खेलतालिका नभएको बताएपछि विश्व क्रिकेटको उच्च निकायको मागनिर्देशनअनुरूप नै नेपाली क्रिकेटको प्रशिक्षण असोजसम्म सार्न लागिएको जनाइएको छ ।
भदौको अन्तिम सातादेखि असोज पहिलो सातासम्म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनिएको छ ।कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले महामारीको रूप लिएपछि नेपाली क्रिकेट टोली मार्चयता मैदान प्रवेश गरेको छैन । नोभेम्बरमा दुबईमा कुनै शृंखला आयोजना गर्ने आशामा भदौ १ देखि त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आवासीय सुविधासहित क्यानले प्रशिक्षणलाई आवश्यक तयारी सुरु गरेको थियो ।
नेपालले विश्वकप लिग २ मा अप्रिलमा नामिबिया, जुनमा पपुवा न्युगिनी र जुलाईमा स्कटल्यान्डमा गएर खेल्ने कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भइसकेको छ । नामिबियामा नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनीमा पपुवासँग र युएई तथा स्कटल्यान्डमा स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग २–२ गरी १२ खेल खेल्ने तालिका थियो ।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राष्ट्र बनेपछि विश्वकप लिग २ मा रहेको नेपालले ४ खेल खेलिसकेको छ र २०२२ सम्म गरी गरी नेपालले थप ३२ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ । क्यान स्रोतका अनुसार नेपालले अब २०२१ मा ७ त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्न सक्नेछ । निर्धारित तालिकाअनुसार नेपाल २०२१ को जवनरीमा ओमान जानेछ र त्यहाँ ओमान र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फेब्रुअरीमा यूएई र पपुवा न्युगिनी काठमाडौं आएर नेपालसँग खेल्ने तालिका छ । नोभेम्बरमा नामिबिया र स्कटल्यान्ड पनि नेपाल आउने छन् । यसबीचमा अगस्टमा अमेरिका गएर नेपालले अमेरिका र ओमानसँग खेल्नेछ ।
नेपालको नामियिबा, स्कटल्यान्ड र पपुवा न्युगिनी भ्रमण पनि २०२१ मै मिलाइने सम्भावना छ । सन् २०२२ को जनवरीमा यूएई गएर यूएई र नामिबियासँग खेलेपछि नेपालको विश्वकप लिग २ को यात्रा टुंगिने छ । नेपालले यसै वर्षको मार्चमा अमेरिका र ओमानसँग कीर्तिपुरमा खेल्दै विश्वकप लिग २ को यात्रा सुरु गरेको हो । त्यसमा अमेरिकासँगको दुवै खेल जिते पनि ओमानसँगका दुवै खेल हारेको थियो ।
चारमहिने लकडाउनपछि भदौ १ गतेबाट सरकारले खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुरूप क्यानले नेपाल सरकार र आईसीसीको गाइडलाइन अनुसार नेपाली पुरुष राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको थियो ।
नेपाली टोली प्रशिक्षणका लागि आएपछि पहिला पीसीआर परीक्षण गर्ने र त्यसपछि दुई साता त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, क्युरेटर, मैदानका कर्मचारीहरू सबैको पीसीआर परीक्षण गरिने तयारी गरेको थियो
आईसीसीको निर्देशनअनुरूप खेलाडीका लागि त्रिवि मैदानको हाताभित्रै आवासीय व्यवस्था मिलाउन लागिएको थियो । त्रिवि मैदान हाताभित्रको भीआईपी प्यारापिट र स्कोर बोर्ड अपडेट गर्न बनाइएको भवनमा खेलाडीलाई आवासीय व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको क्यानले असोजमा प्रशिक्षण धकेलिएपछि हाल रहेको जिम भवनमा आवासीय सुविधा बनाउने विकल्प पनि अगाडि ल्याएको बताइएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:०८
श्रावण २२, २०७७ बिन्दु अधिकारी ढकाल
कोरोना महामारीले विश्वका ७ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकहरूलाई समेत कोरोनाले थला पारेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन लकडाउन गरिए पनि भोलिको दिन कस्तो होला भन्ने कसैलाई थाहा छैन । कसैको भविष्यको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । सर्वत्र कोरोना महामारीको चर्चा छ । मानिससँगै डराउनुपर्ने र छेउमा जानै नहुने स्थिति छ । यसैकारण पर्यटन व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्दमा छ । त्यस्तै सभाहल, सिनेमाहल, मठ–मन्दिर र मस्जिद सुनसान छन् ।
‘बार बारे तुलफूल जोगिन्छ’ भनेझैं महामारीबाट नागरिकलाई लकडाउनले केही हदसम्म जोगाए पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूले हातमुख जोर्ने कसरी ? गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोगले भन्दा भोकले सताइरहेको छ । यो नेपालीको मात्र होइन विश्वभरिका लाखौं–करोडौं श्रमिकको समस्या हो । बदलिँदो दिनचर्याले निराशा पैदा गरेको छ । सकारात्मक हुने आधार देखिँदैन । थिति बस्न खोज्दै गरेको हाम्रो अर्थ–परिवेशलाई कोरोनाले ‘तावाको माछा भुङ्ग्रोमा’ भनेझैं अर्को कठिन स्थितिमा पुर्‍यायो । समग्र अर्थतन्त्र सोच्दै नसोचेको कठिन स्थितिमा छ । तैपनि ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ हुन्छ भनेझैं हरेक संकटभित्र अवसर पनि हुन्छ । कोरोनाकाल अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मौका हुन सक्छ ।
हिजोको प्रदूषणयुक्त प्रकृति लकडाउनका कारण केही हदसम्म धूलोधूवाँमुक्त छ । यति बेला वातावरण सफा, स्वच्छ र हराभरा छ । वसन्तको आगमनले झन् सुन्दरता थपेको छ । लाहुर जाने हाम्रो चलन उही छ, समय मात्रै बदलियो । उति बेला भोट जाने मदनहरू अहिले भारत, खाडी, युरोप र अमेरिका पुग्छन् । महिलाहरू पनि बिदेसिएका छन् । पछिल्लो शताब्दीमा भएका विकासका कारण संसारै एउटा गाउँजस्तो भएको छ । अपरिचितसँग भय लाग्न छोड्यो र एकअर्काका रहनसहन र संस्कृति जान्ने उत्सुकता बढ्दै गयो । एउटा देशबाट अर्को देशमा जानेहरूको संख्या पनि बढ्यो । पठनपाठनदेखि रोजगारीको सिलसिलामा मानिसहरू संसारभर फिँजिए । तर अचानक आइपरेको कोरोना महामारीले देशदेशान्तरको अन्तरघुलनलाई ठप्प मात्रै पारेन, ‘युवाहरू विदेश पनि जान्थे रे’ भन्ने दिन ल्याइदियो ।
बाध्यतावश विदेश उछिट्टिएकाहरू भटाभट फर्किरहेका छन् । आउन बाँकीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा छन् । लाखौं खर्चेर सपनासहित उडेकाहरूले अब आफ्नो कला, कौशल, सीप र दक्षतालाई यही माटोमा प्रयोग गर्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यतै पसिना बगाए आफ्नै पाखोमा हीरामोती फल्ने थियो । सहरमा सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि धमाधम गाउँ फर्किनेहरूको भीड बढिरहेको छ । यस महामारीबाट बच्न सहरभन्दा गाउँ बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने भावनाले गर्दा गाउँ फर्कनेहरू बढिरहेका छन् । काठमाडौंबाट मात्रै ८ लाख हाराहारीमा मानिस गाउँ फर्किए भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
देशको मेरुदण्ड मानिने युवालाई आधुनिक ढाँचाको कृषिकर्ममा लगाउन सरकार लागिपर्ने हो भने यो संकट अवसरमा बदलिनेछ । कोरोना महामारीले मानिसलाई झुपडी नै भए पनि आफ्नै घर राम्रो, आफ्नै परिवार प्यारो भन्ने चेत खुलाइदियो र गाउँ फर्काइदियो । लकडाउनमा पारिवारिक सम्बन्ध र एकआपसको माया अझ मजबुत बन्यो । कोरोनालाई जित्न रोग प्रतिरोध क्षमता आवश्यक छ अनि योगले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउँछ । योसम्बन्धी पूर्वजले छोडेका ज्ञानले हामीलाई लड्न मद्दत गर्छ । प्रकृतिलाई जति मात्रमा भत्काउने बिगार्ने काम गरिन्छ, परिणाम पनि उति नै निराशाजनक आउँछ । हामीले पहिले प्रकृति बिगारेका कारण यो महामारी आएको त होइन ?
अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अहिलेको अवस्था लम्बिए ठूलै विपत् निम्तिनेछ । विभिन्न अनुसन्धानले पनि यही भन्छ । हामी संकटको मैदानमा छौं तर हिम्मत हार्नु हुन्न । रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्रमुख विकल्प कृषि क्षेत्र हो । योजना र ठोस विचारसहित कृषि प्रणालीलाई प्रविधि–उन्मुख गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन समयमै बीउ र मल सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै सिँचाइको उचित व्यवस्था जरुरी छ । युवालक्षित कृषि कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि ठोस योजना ल्याएर युवालाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृषिमा अनुदान सुनिश्चित गर्न सकियो भने जीवन निर्वाहसँगै राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख आधार कृषिलाई बनाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:०७